Dowladda Jarmalka ayaa maalgelin ku fidisa ilaalinta duur -joogta Tanzania
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Waajib ah » Dowladda Jarmalka ayaa maalgelin ku fidisa ilaalinta duur -joogta Tanzania
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Investments • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Danjiraha Jarmalka ee Tanzania Regine Hess
Tansaaniya casriga ah, meelaha loo ilaaliyo kaymaha iyo ilaalinta duurjoogta ayaa ah 29 boqolkiiba muuqaalka. Boqolkiiba 13 ee dalka ayaa loo qoondeeyay jardiinooyinka qaranka iyo aagagga ilaalinta cayaaraha si loogu adeego warshadaha dalxiiska.
Dawladda Jarmalka ayaa fidisay taageerada maaliyadeed iyo farsamo si ay u maalgeliso duurjoogta iyo ilaalinta dabeecadda Tansaaniya iyada oo loo marayo iskaashi laba geesood ah oo u dhexeeya labada dal ee iskaashiga dhaqameed u leh horumarinta dalxiiska.
Markay xusayaan lixdan sannadood oo xorriyaddeeda ah, Tansaaniya waxay sii wadaysaa inay taageero dhaqaale ka hesho Jarmalka si loo ilaaliyo jardiinooyinka duurjoogta ee muhiimka ah oo ah isha ugu weyn ee dalxiiska.
Iyada oo hoggaaminaysa lamaanaha ilaalinta duurjoogta, dawladda Jarmalku waxay saxeexday heshiis deeq lacageed oo dhan 25 milyan oo Euro ah oo lagu maalgelinayo horumarinta waarta ee mashruuca deegaanka deegaanka la ilaaliyo ee Tansaaniya.
Seerayaasha Qaranka Tansaaniya ayaa bayaankoodii ugu dambeeyay ku sheegay in heshiiska la saxiixay uu ka koobnaan doono mashaariicda ilaalinta Katavi iyo Mahale ee ku yaalla Koonfurta Dhul -weynaha iyo wareegyada dalxiiska ee reer Tansaaniya.
Mashruuca ilaalinta ayaa sidoo kale dabooli doona Barnaamijka Ilaalinta Horumarinta Deegaanka ee Serengeti (SEDCP II). Qaar ka mid ah waxqabadyada lagu qaban doono Serengeti ayaa xoojinaya ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah ee halkaas.
Dawladda Jarmalku waxay sidoo kale ka go'an tahay inay taageerto shanta jardiino ee dhowaan la aasaasay si loo ilaaliyo ilaalinta duurjoogta iyo horumarinta dalxiiska ee Tansaaniya iyo Afrika.
Dhawaanahan, diiradda iskaashiga u dhexeeya Jarmalka iyo Tansaaniya wuxuu ku saabsanaa ilaalinta Xadiiqadaha Qaranka ee Mahale iyo Katavi iyo marinkooda.
Beerta Qaranka ee Serengeti iyo Kaydka Ciyaarta Selous waa furaha iyo hormuudka jardiinooyinka duurjoogta ee Afrika oo hoos yimaada taageerada ilaalinta Jarmalka.
Sannadkii 1958 -kii Prof. Grzimek iyo wiilkiisa Michael waxay ka bilaabeen Serengeti daraasaddooda duur -joogta ugu horreeya iyo dokumentarigooda “Serengeti Ma dhiman doono”.
Serengeti hadda waa aagga caanka ah ee laga ilaaliyo duur-joogta Afrika.
Dale N Bickenbach wuxuu leeyahay,
September 20, 2021 at 13: 41
Qodobku waa mid aad u wanaagsan. Markii aan booqday Serengeti waxaan is arkay aniga oo aad u qiiraysanaya la qabsiga hormuudka u ah tamarta qorraxda iyo dib -u -cusboonaysiinta marka loo eego naasleyda kale ee maanka ku haya ganacsigooda. Tan iyo markii guri dadban lagu hormariyay Deutschland iyo barnaamijka moodeelinta oo lagu hagaajiyay Waqooyiga Ameerika rajadaydu waxay ahayd inaan si uun u sii fogeeyo isticmaalka shidaalka fosil ee Serengeti, iyo Tansaaniya iyadoo la isku darayo tiknoolajiyadda casriga ah ee ugu fiican iyadoo la ilaalinayo bay'ada la jaanqaadi karta naasleyda iyo dalxiiska aadanaha. Xiriirrada xiisaha leh waa la mahadin doonaa. Mahadsanid.